Turnkey - Guangzhou Airwoods Deegaanka Teknolojiyadda Co., Ltd.
Waxaan ku siineynaa xalal furfuran oo hufan oo aan xuduud lahayn ganacsiga iyo
mashruuca HVAC Nidaamka mashruuca. Mashruucyada loo yaqaan 'turnkey', waxaan ku bixineynaa dhameystir
xalka adeegga hoose.
Waxaan ku siineynaa xalal waxtar leh oo dhameystiran oo aan xuduud lahayn oo loogu talagalay mashruuca HVAC Nidaamka ganacsiga iyo warshadaha. Mashruucyada loo yaqaan 'turnkey', waxaan ku bixinnaa xalal dhammaystiran oo ka hooseeya adeegga.
Kooxda Injineerku waxay u horumariyaan xalal cusub mashruuc kasta si dhakhso leh oo hufan xal.
Kooxdayadu waxay doortaan oo siiyaan wax soo saarka ugu tayada sareeya macaamiisheenna adduunka oo idil.
-Gaadiidka & Rakibidda
Kooxdayadu waxay bixiyaan qiimo jaban, maraakiib waqtiyaysan, maxaa intaa ka badan oo aan sidoo kale bixinno rakibidda mashruuca.
Si loo damaanad qaado in xarun kasta ay si habsami leh u shaqeyn doonto marka ay soo gasho khadka tooska ah, tijaabada kooxdu waxay wadataa mashiinka oo dhan waxayna ka dhigaysaa mid si habsami leh u socda hawl maalmeedka.